Iilwandle zaseKuwait: i-al-Khiran -indawo yokubhenela ukuhlala kude
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Iilwandle zaseKuwait: i-al-Khiran -indawo yokubhenela ukuhlala kude
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeKuwait Breaking • iindaba • Technology • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Agasti 13, 2017
Abakhenkethi kunye nabahlali baseKuwait kufuneka bahlale kude nendawo ekuthiwa yi-al-Khiran e Kuwait.
I-Kuwait yalwa ngeCawa yokulawula ukuchitheka kweoyile kunxweme lwayo olusemazantsi olwalungcolise iilwandle zayo, isoyikisa ukonakalisa izityalo zamandla kunye nezikhululo zamanzi, kwaye yashiya indawo emnyama emnyama kwiPersian Gulf.
Amaphenyane kunye nabasebenzi babeka i-booms emanzini ukuzama ukuhambisa ukuchitheka. Amagosa afuna ukukhusela iindlela zamanzi, izityalo zamandla kunye nezixhobo zamanzi kuqala, emva koko acoce iilwandle ezingqongileyo, ngokwengxelo yearhente yeendaba elawulwa ngurhulumente.
U-Khaled al-Hajeri, umongameli we-Green Line Society yase-Kuwait, uthe umbutho ongajonganga nzuzo ubeka urhulumente uxanduva kuwo nawuphi na umonakalo okanye iziphumo zempilo yokuchitheka.
"Kuya kubakho iziphumo ezibi kwabo banoxanduva lwesi sehlo, kwaye siza kubatshutshisa," u-Sheikh Abdullah al-Sabah, ilungu losapho olulawulayo.
Abasemagunyeni kwilizwe elingummelwane laseSaudi Arabia benze isicwangciso sentshukumo esingxamisekileyo sokujongana nokuchitheka kwaye bebeqhuba uphando lwendawo leyo, ngokwesitatimende esenziwe liSebe lase-Saudi Arabia.
Iziko lokusebenza ngokudibeneyo kwidolophu yomda wase-Saudi eKhafji lithe izibonelelo zalapho azichaphazelekanga kukuchitheka.
I-Kuwait ithe inkampani yeoyile yaseMelika i-DRM Corp. kunye neengcali zokuthintela i-oyile Spill Response Limited zincedisa ekucoceni. IChevron, eseSan Ramon, eCalifornia, isebenza ngamacala omabini omda.
Indawo yaseKuwait inekhaya leoyile kunye negesi yendalo ekwabelwana ngayo yiKuwait naseSaudi Arabia. Eminye yezo ndawo zidumileyo zatshiswa yimikhosi yaseIraq ibuyela umva kumdibaniso okhokelwa yi-US kwimfazwe yase-Gulf ka-1991 eyaphela umsebenzi ka-Saddam Hussein welizwe.